Faberlik (Faberlic) Pay မှဘယ်လိုနေသလဲ? | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
Faberlik (Faberlic) Pay မှဘယ်လိုနေသလဲ?
အမိန့် Faberlic သင်အေဂျင်စီရုံးများအတွက်လက်ခံရရှိအပေါ်သို့ပေးဆောင်ပေမယ့် terminal ကို အသုံးပြု. များအတွက်ပေးဆောင်ဖို့အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းနိုငျသညျ, ကယင်း၏အမှတ်စဉ်နံပါတ်နှင့်ငွေတောင်းခံလွှာအရေအတွက်ကအကြံပေးသိရန်လုံလောက်ပါတယ်။
အဆိုပါချွေတာသုံးစွဲ Bank ၏ဟောင်းတစ်ဦးဝန်ထမ်းအဖြစ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဖြေပေးနိုင်ပါသည်။ သငျသညျထုတျလုပျမှု၏ငွေပေးချေမှုများအတွက်အသေးစိတ် (INN, KPP, အကောင့်စစ်ဆေးနေ, CSC, ဒါမှမဟုတ် OKATO oktmo, Bik Bankai သင့်ရဲ့ထုတ်ကုန်ကုဒ်) ကိုသိရန်လိုအပ်သည့်ကုန်စည်များအတွက်ပေးဆောင်စေရန်။ ဤအသေးစိတျဘဏ်ဖောက်သည်လာပေးဆောင်အတူ။ အဆိုပါကော်မရှင် 3% (30 ရူဘယ်တစ်နိမ့်ဆုံး) ဖြစ်လာဖွယ်ရှိသည်။ အော်ပရေတာသင် (ငွေပေးချေမှုကိုအတည်ပြု) တစ်ဦးလက်ခံရရှိကိုငါပေးမည်။ ဒါကငွေလက်ခံဖြတ်ပိုင်း (ထိုငွေပေးချေမှုကိုအတည်ပြုရန်) ကိုရုရှားကုမ္ပဏီမှမေးလ်ကနေတဆင့်လှေတျတျောမူရမည်ဖြစ်သည်။ သင်တို့သည်လည်းအင်တာနက်ဘဏ် Quote မှတဆင့်ပေးဆောင်နိုင်ပါတယ်; Sberbank onlaynquot; (သင်က system ကိုအသုံးပြုခွင့်ရှိပါက) ။ ဒီလိုလုပ်ဖို့မီနူး, လွှဲပြောင်းခြင်းနှင့်ငွေပေးချေမှုသို့သွား, ရှာဖွေရေးအတွက် (VAT နံပါတ်, အကောင့်သို့မဟုတ်အက္ခရာအမည်အားစစ်ဆေးနေ) ကိုအသေးစိတျတစျခုရိုက်ထည့်ပါ။ အဆိုပါဒေတာဘေ့စကဒီအဖွဲ့အစည်းကိုရှိပါတယ်လျှင်သင်ပေးဆောင်နိုင်ပါလိမ့်မည်။
_1 ။ သင်တစ်ဦးမှတ်ပုံတင်အကြံပေးသို့မဟုတ်ဝယ် Faberlik ထုတ်ကုန်များမှာလျှင်, အမိန့်ပုဂ္ဂလိကရုံးထဲမှာ schta မှပေးဆောင်စေခဲ့သည်။ သငျသညျအမိန့်ပေးချေမီနှင့်, သင် UHP တက်ဖြည့်ဖို့လိုပါတယ်။ နညျးလမျးမြားစှာ:
သင့်ရဲ့ UHP သို့မဟုတ်ကဒ်ကု သ. မရသောတစ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအွန်လိုင်းရုံးဘဏ်ထဲမှာ;
အီလက်ထရောနစ်ပိုက်ဆံအိတ်အသုံးပြုခြင်း: QIWI, WebMoney et al ။
_2 ။ သင်တစ်ဦးအတိုင်ပင်ခံအနေဖြင့်ထုတ်ကုန်အမိန့်လျှင်, သူ့ကိုပေမယ် UHP အတိုင်ပင်ခံပေါ်တွင်ငွေသားနှင့်အတူသို့မဟုတ်ဖော်ပြထားသောနည်းလမ်းများကိုအထက်ပေးဆောင်။
နှင့်အင်တာနက်မှတစ်ဆင့်အမိန့်ကိုလုပ်တဲ့သူတွေကိုအကြံပေးများအဘို့, သငျသညျ site ကို http://www.faberlic.ru/ အပေါ်တစ်ဦးပုဂ္ဂလိကရုံးထဲမှာထည့်သွင်းသောသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကောင့်ကနေပေးဆောင်နိုင်ပါတယ်
အဘယ်သူမျှမအဖိုးအခ MTS, Messenger ကို, Euroset, Sberbank Sberbank အွန်လိုင်းစနစ်ကဒါမှမဟုတ် terminal သို့မဟုတ်ငွေသား၏ Salon မှတဆင့် (ထိုကုန်စည်များထုတ်ပေးရေးအတွက်အချက်လည်းမရှိလျှင်)
ကော်မရှင်နှင့်အတူ ဆိပ်ကမ်းငွေပေးချေမှုစနစ်များမှတဆင့်: CyberPlat®, Kampey, Kiwi, JCB နှင့်အခြားသူများ။
နည်းလမ်းများစွာအတွက်ကုမ္ပဏီ Faberlic အတွက်လုပ် Pay ကိုအမိန့်။ ပထမဦးဆုံးအရာတွေအများကြီးသင်သည်သင်၏ဘွတ်ကင်ရာ၌ခန့်ထားပြီဘယ်လိုပေါ်တွင်မူတည်သည်။
ကုမ္ပဏီ၏အတိုင်ပင်ခံတစ်ဦးအမိန့်ကိုဖန်ဆင်းပါကပုဂ္ဂလိကဘဏ်ကနေတဆင့်သင့်ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းပေးဆောင်နိုင်ပါ။ ပုဂ္ဂလိကဘဏ်ကော်မရှင်ယူသည်မဟုတ်။ ငါဒါအဆင်ပြေလွယ်ကူခံစားရပုဂ္ဂလိကဘဏ်တို့ကသာပေးဆောင်။
သငျသညျက e-ပိုက်ဆံအိတ်ရှိပါကသူတို့ကိုရှောက်သင်တို့သည်လည်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးကက်ဘိနက်ကနေတဆင့်ဒါမှမဟုတ် terminal ကိုအတွက်ကုန်စည်များအတွက်ငွေပေးချေစေနိုင်သည်။
အမိန့်စာတိုက်ရှိရာသို့လာလျှင်, ထို့နောက်သငျသညျအမိန့်၏ပမာဏအပြင်တစ်ချိန်တည်းမှာ, အ post ကိုသာပေးဆောင်ဖို့လိုတယ်တစ်ခုအမိန့်စာပို့ခအဘို့အ esch လစာလိုအပ်ပါလိမ့်မည်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
အမိန့်သစ်ကို post ကိုရှိရာသို့လာလျှင်, ထိုငွေပေးချေမှုသာမေးလ်အသစ်များ၏ဌာနကိုဖန်ဆင်းသည်။
20 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,356 စက္ကန့်ကျော် Generate ။